Sida loo helo nuqul Music faylasha iyo saar Them -
Sida loo Helo nuqul Music faylasha iyo saar Them
Akownnada la files music qaato oo meel, burburisay playlist kaamil ah oo waqti marka aad isku dayaan in ay tirtirto. Haddii aad uploading music in Lugood, waxaa jiri kara marar waxaad yeelan doontaa ee files music isku mid ah iyo Lugood laga yaabaa in aanay awoodin in ay aqoonsadaan farqiga. Tani waa sababta Lugood go'aansan files magacyo file iyo xajmiga iyo ayaan loo qaadan Karin in lagu xisaabiyo in aad dhagaysiga muusigga la mid ah.
Maxaa dhacaya haddii ay ahayd hab sahlan baxay inuu ka baxo dhibaatada?
1. Sida loo Helo iyo saar nuqul Music Faylal ay la TunesGo
2. Sida loo Helo iyo saar nuqul Music Faylal ay ku Music Library on Windows
3. Sida loo Helo iyo saar nuqul Music Faylal ay ku Music Library on Mac
Waxaa had iyo jeer waa wax aad looga xumaado in ay arkaan nuqul music iyo videos in aad maktabadda warbaahinta. Iyadoo ciyaartoyda warbaahinta sida Lugood, waxaa suurto gal ah waxaad yeelan doontaa qadarka wayn ee files nuqul. Waxaad kale ma aadi karo iyada oo kumanaan heeso kuwa oo iyaga gacanta tirtirto. Waxaad u baahan tahay qalab gaar ah oo ka dhigi kara geedi socodkan fudud.
Sida loo Helo iyo saar nuqul Music Faylal ay la TunesGo
Wixii maktabadda Lugood
Haddii aad rabto in aad tirto faylasha maktabada Lugood aad, qalabka sida TunesGo noqon lahaa mid waxtar leh. Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo ka dhigaysa dadaalka of fudud tirka ee files warbaahinta nuqul. TunesGo uu leeyahay muuqaalada kala duwan kuu oggolaadaan in aad si ay u maareeyaan music on qalabka kala duwan xadaynta ee aan Lugood. Waa sidan sidii aad ka heli kartaa iyo tirtiri gabayadii nuqul ka maktabad aad Lugood.
1. Tag wondershare.com iyo soo bixi TunesGo ah. Ka dib markii ay soo degsado, aad u baahan tahay si ay u rakibi. Si kastaba ha ahaatee, hubso in aad leedahay Lugood rakibay aad kombuutarka sameeyo, iyo maktabadda ayaa warbaahinta oo dhan ku qalab aad. Iskaanka warbaahinta qaadataa waqti, iyo haddii aad kor ku raran yihiin files music, uu ku qaato muddo ah lagu sawiro si ay u buuxiyaan.
2. Daahfurka Lugood oo wuxuu muujin doonaa dhammaan warbaahinta in maktabadda. Laga soo bilaabo uu furmo suuqa hoose, guji "Nadiifinta Lugood Library".
3. Hadda, TunesGo si toos ah iskaan doonaa gabayadii nuqul oo tags music maqan iyo kuwa kale. Hadda riix "Nadiifinta" iyo popup ah u muuqataa si loo xaqiijiyo tallaabada. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u xaqiijiyo, Lugood bilaabaa inuu ka saarto heeso nuqul oo wax toosiyaan kale.
Tani waa habka ugu fudud ee ay u tirtirto faylasha nuqul aad maktabadda Lugood.
Sida loo Helo iyo saar nuqul Music Faylal ay ku Music Library on Windows
Hayso files music nuqul on your computer Windows? Waa sidan sidii aad u tirtiri kartaa files music nuqul ka Windows - Way fududahay oo deg deg ah aad u!
Si aad u tirtirto songs nuqul ku saabsan Windows PC, aad u baahan tahay qalab xisbiga saddexaad sida gacanta raadinta iyo la tirtiro files noqon doonto mid adag oo waqti lumis. Qalab A sida Audio Dedupe waa weyn yahay, waayo, tirka songs nuqul ku saabsan windows media. Audio Dedupe waa aalad in aanu ku tiirsan size file, magaca, ama ID3 tags. Waxaa hubinayaa heeso iyo dhagaysan iyaga si aad u ogaato isku mid ah. Farsamo ahaan, waxaa falanqaynta audio sida xitaa code xogta binary ahaan kala duwan ee isku files. Halkan waxa ku jira talaabooyin si aad u ogaato iyo tirtirto faylasha labalaabka.
1. Fur barnaamijka guji folder Add. Waxaa laga baarayo doonaa galka ah ee files warbaahinta. Waxay qaadataa dhowr daqiiqo haddii files badan yihiin.
2. Hadda dooro Audio is barbar hoos yaala qaybta scan, kaas oo lagu helo liiska hoos hoos.
3. Hadda qabsato qiimaha la doonayo ilaa 70% ama in ka badan ee la mid ah. Tani barbardhigi doona qiimaha oo ka mid ah files audio.
4. Dooro New Cache ka khasnado haddii iskaanka ayaa markii ugu horeysay si kale doortaan khasnado jira.
5. Wax walba dhigay hadda guji Start Scan.
Ka dib markii iskaanka:
1. Hadda waxaad haysataa files qaybsan midab oo kala duwan. Sida aad Auto Check doorasho, barnaamijka uu baaritaanku files leh bitrate hoose, size file yar, ama muddo gaaban. Waa hagaag, waxaad isticmaali kartaa sidoo kale ciyaaryahanka gudaha si aad u hubiso faylasha.
2. Haddaba haddii aad rabto in aad u guurto faylasha hubiyaa in click kale ku soo baaro files si kale guji files delete hubiyaa.
Xagga sare, hab siinayaa fursado badan oo aad si Halkan ka dooro inta badan u muuqato habka dadaal. Si kastaba ha ahaatee, waxay hubineysaa in files aad tirtiray waa nuqul dhabta ah.
Sida loo Helo iyo saar nuqul Music Faylal ay ku Music Library on Mac
Waa sidan sidii aad ka saari kara files music nuqul maktabadda music ka Mac ah.
Haddii aad rabto, ka saar files ka yimid Mac aan la isticmaalayo Lugood markaas Gemini waa qalab weyn. Gemini oo horumarsan by MacPaw. Si ka duwan software kale, wax Faydi ma dhammaan noocyada kala duwan ee files nuqul ka nidaamka. Waa awood badan, user-friendly, oo si dhakhso ah. Waxaad heli doontaa buuxda gacanta ka badan waxa aad la tirtiro sida aad iyaga ku eegaan karo ka hor la tirtiro. Waa sidan sidii aad iyaga tirtiri kartaa.
1. Download Gemini ka link: http://macpaw.com/gemini oo ku xidh. 2. Marka faylka la geliyo, kaliya waxa ay ku abuurtaan. On furitanka, waxaad dooran kartaa faylasha ama baarista dhamaystiran Mac for files nuqul. Waxaa laga baarayo doonaa cayn kasta files nuqul on caga cayimay. 3. Haddaba waxay muujin doontaa in files yihiin nuqul oo muujinaysa tirada tus ka faylasha in. Haddii aad rabto in meesha laga saaro, files music u tag oo soo arag music faylasha. Haddii aad rabto in aad iyaga dhan tirtirto kaliya guji Auto dooro dusheeda. Waxaa soo xuli doona dhammaan faylasha ku filan hal nuqul ee asalka ah. Hadda riix saar la doortay. 4. Screen Next waxaad arki doontaa files ee la doortay qaadidda. Deselect kasta oo iyaga ka mid ah haddii aad jeceshahay. Marka aad hubto oo ku saabsan faylka, guji kaliya ee ka saar meesha ugu hooseysa.
Software Tani waa incredibility fudud oo si sahlan loo isticmaali. Sawirro si toos ah, waxa ay ku eegaan oo ay tirtirto. Qasabno yar gudahood, waxaad ka heli saari doona faylasha nuqul ku saabsan Mac. Waa weyn u tirka dhammaan noocyada kala duwan ee files on Mac.
Xagga sare, waa software si sahlan u heli karo ka-dejiyeyaasha rasmiga ah. Si kastaba ha ahaatee, software Mac lagala soo bixi karaa dukaanka Apple. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta la tirtiro loo hubiyo waxa gudbiyo aad tirka iyo inay yihiin nuqul aad u. Booqo goobaha ay si rasmi ah macluumaad dheeraad ah iyo taageero.
> Resource > Music > Sida loo Helo nuqul Music faylasha iyo saar